नौ घण्टे नेपाल भ्रमणमा भारतीय बिदेशमन्त्री खुर्सिदले के के गरी बिताए? | abroad नौ घण्टे नेपाल भ्रमणमा भारतीय बिदेशमन्त्री खुर्सिदले के के गरी बिताए? | abroad
We have 1345 guests and 224 members online
Content View Hits : 35808692
Wednesday, 10 July 2013 03:10
काठमाडौं- भारतीय बिदेशमन्त्री सलमान खुर्सिद नेपालको ९ घण्टे भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता भएका छन् । बिहान ९ बजेर २० मिनेट जाँदा त्रिभुवन बिमानस्थलमा ओर्लेका उनी पौने ६ बजे आफनै देश फर्के । ९ घण्टा के के गरी बिताए त खुर्सिदले?
Indian Foreign Minister Salman Khurshid with Nepalese Government Officials in Kathmandu on July 9, 2013. Photos courtesy: Anand
विदेशमन्त्री खुर्सिदले नेपालको राजनीतिमा भारतले कहिल्यै हस्तक्षेप नगर्ने बताए । त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै आफू नेपालमा समयमै चुनाव होस भन्ने पक्षमा रहेको बताए । समयमा नै चुनाव भएर नयाँ संबिधान लेखियोस भन्ने पक्षमा भारत रहेको उनको भनाइ थियो । संक्रमणकालको छिटटै अन्त्य भएर आर्थिक बिकाशमा नेपालले फड्को मार्ने उनले बताए । त्यसपछि सिहदरवारमा समकक्षी माधव घिमिरेसँग भेट गरे, द्धिपक्षीय हितका बिषयमा छलफल गरे ।
नेपाल र भारतका उच्च सरकारी अधिकारीहरु दुई मुलुकबीच विद्यमान समस्या छलफल र वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न सहमत भएका छन् ।
दुवै मुलुकका विदेश मन्त्रीको नेतृत्वमा आज सम्पन्न उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरु सम्मिलित द्विपक्षीय वार्तामा डुबान, व्यापार, वाणिज्यलगायत क्षेत्रका समस्या निराकरण गर्ने सहमति भएको हो । व्यापार सहजीकरण, प्रयोगशाला परीक्षण, जलस्रोत, प्रत्यर्पण सन्धि, अतिरिक्त भन्सार महसुललगायत सबै विषयमा कुरा वार्तामा छलफल भएको छ ।
नेपालमा उत्पादित सामग्रीमा भारतले लगाउँदै आएको अतिरिक्त भन्सार महसुलको प्रावधान अन्त्य गर्ने तथा निर्यात प्रावधानका सबै बाधा हटाउन दुवै मुलुकका वाणिज्य सचिव नेतृत्वको संयुक्त समितिले आवश्यक कार्य गर्ने सहमति भएको छ ।
भारतीय सहयोगमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुदृढीकरण गर्ने प्रस्ताव अदालतमा विचाराधीन रहेकाले थप टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रबक्ता अर्जुनबहादुर थापालले नेपाल र भारतले आ-आफ्ना भूमिमा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्न चाहेको स्पष्ट पारे । गत महिना सम्पन्न नेपाल-भारत गृह सचिवस्तरीय बैठकमा सीमा क्षेत्रमा अध्यागमन कार्यालय खोल्ने सहमति भएको थियो ।
मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसँग झण्डै ४५ मिनेट भेटवार्ता
विदेशमन्त्री खुर्सिदले सिहदरबारमा मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसँग झण्डै ४५ मिनेट बिताए । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिहदरवारमा भेटमा मुलुकको पछिल्लो राजनैतिक अबस्था, आगामी संबिधान सभाको निर्वाचनलगायतका बिषयमा छलफल भएको छ ।
भेटका क्रममा अध्यक्ष रेग्मीले तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुनेमा ढुक्क रहन आग्रह गरेका छन् । बिदेशमन्त्री खुर्सिदले भने भारत नेपालमा नयॉ संबिधान बनोस भन्ने पक्षमा रहेको बताउदै निर्वाचनकालागि जस्तोसुकै सहयोग गर्न आफुहरु तयार रहेको बताए । उनले निर्वाचन मिति घोषणा भएकोमा रेग्मीलाइ धन्यबादसमेत दिएको भेटपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रबक्ता अर्जुनबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
साथै भेटमा सिमा क्षेत्रका समस्या, दार्चुलामा भारतिय बॉध खोलेका कारण बाढी पहिरोले पुर्‍याएको क्षतिपुर्तीलगायतका बिषयमा पनि छलफल भएको थियो । दार्चुलाका बिषयमा दुबै पक्षपछि समाधान निकाल्ने सहमति भएको थापाले बताए ।
यसैबिच, खुर्सिदले आजै राष्ट्रपति डा. रामबरण यादबसँग पनि शिष्टाचार भेट गरे ।
त्यसपछि उनको सम्मानमा परराष्ट्र तथा गृहमन्त्री माधव घिमिरेले आयोजना गरेको दिवा भोजमा सरिक भए ।
भारतीय बिदेशमन्त्री खुर्सिदले प्रमुख दलका नेताहरुसँग पनि भेट गरेका छन् । राजधानीको होटल द्धारीकामा उनले एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भटटराइ, महासचिब पोष्टबहादुर बोगटी, नारायणकाजी श्रेष्ट, हिसीला यमी, राम कार्कीलगायतका नेताहरुसंग भेट गरेका छन्।
भेटपछि एकिकृत नेकपा माओबादीका नेता राम कार्कीले निर्वाचनका बिषयमा खुल्लासंग छलफल गरेको बताए ।
खुर्सिदले आजै काग्रेश बरीष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, मिनेन्द्र रिजाल, डा. रामशरण महतसँग पनि भेट गरे । भेटपछि कॉग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले चुनाव र त्यससँग जोडिएका बिषयमा छलफल भएको बताए ।
खुसिैदले आजै एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसहितका नेताहरुसँग पनि भेट गरे । भेटपछि एमाले अध्यक्ष खनालले आगामी चुनावका बिषयमा छलफल भएको प्रतिक्रिया दिए ।
बिदेशमन्त्री खुर्सिदले आजै मधेसबादी दलका नेताहरुसँग पनि भेट गरे । भेट पछि पत्रकार सम्मेलन गरे । नेपालमा छिटटै चुनाब हुने र संबिधान बन्ने बिश्बास ब्यक्त गरे । अनि बिशेष बिमानबाट नयाँ दिल्ली हान्निए ।